I-China i-PDQ ebekiweyo yesiQinisekiso sePallet yeeWalmart Stores abavelisi kunye nabathengisi | URaymin
Inombolo yomzekelo: GFPD20200705
Ubukhulu: W48 `` x D20 '' x H48 ``
izinto Ifluti eqinileyo B + 350gsm CCNB
Ukushicilela: Ukuprinta kweCMYK
Ukugqiba kokugqibela: Ivanishi ebengezelayo
Isixhobo: Akukho nanye
Indawo yokuQala: CN
Igama lebrand: Umboniso weRaymin
Isiqinisekiso: I-SGS, i-ISO, iBSCI
Ubuncinci be-Order Ubungakanani: Ii-100pcs
Ixabiso: Jonga nathi
Iinkcukacha Packaging: Indibano egcwele iimveliso kuyo
Ixesha lokuzisa: Iintsuku ezili-15 ze- ,0005,000pcs
Sample ixesha phambili Iintsuku ezi-3
Intlawulo yeSampula I-150 yeedola, ebuyiswayo emva koku-odolwa ngobuninzi
Immimiselo yokuhlawula: L / C.
Amandla okubonelela: Iikhompyuter ze-100,000 ngeveki
Uyilo lolwakhiwo Uyilo lokubonisa isiqingatha sepallet
Umsebenzi wobugcisa / umzobo Ngentando
Ifomathi yobugcisa I-PDF, i-AI, i-PSD, i-PS
Enye indlela yokutsala umdla wabathengi kukushicilela okusemgangathweni kwimiboniso yakho. Oku kunokwenziwa ngokubonisa uphawu lwenkampani yakho, ukubonisa uphawu lwakho okanye ukuqaqambisa imveliso ngendlela ekholisa. Nokuba ukhetha umboniso womgangatho, ukuxhoma imiqondiso yentengiso okanye umnini wencwadana, ukubonisa amakhadibhodi esiko kunokukhokelela kwintengiso ephezulu. Indawo yokuthenga (POP) imiboniso iyaziwa ngokunikezela ngembuyekezo ephezulu kutyalo-mali. Ukubeka imveliso eyilwe kakuhle kunye nemibala ejikeleze ivenkile yakho kunye nokuphuma kunceda ukuzoba amehlo abathengi bakho kwiimveliso zakho ezikhoyo. Sinikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokuprinta ukuhlangabezana neemfuno zabaxumi bethu. Ngamandla ethu ohlukeneyo okushicilela, unokukhetha ukuba loluphi uhlobo oluya kulungela iimfuno zakho kunye nohlahlo-lwabiwo mali. Nokuba ukhetha siphi isimbo, ungalindela okona kulungileyo ngezixhobo zethu eziphambili kunye nakwiziko eliqinisekisiweyo lolawulo lwemibala.
Izakhono zethu zibandakanya:
1) Ukuprintwa kweGlue: Ukufezekisa ukushicilela okusemgangathweni wefoto, siya kuprinta imifanekiso yakho enezisombululo eziphezulu ephepheni, emva koko inyuselwe kwibhodi enamazinki. Le nkqubo isetyenziselwa ukufezekisa iimfuno zakho zokuprinta ezikumgangatho ophezulu.
I-2) I-Flexography: Olu hlobo luhlobo lohlahlo-lwabiwo mali lubandakanya ukuprinta ilogo yakho okanye ubugcisa ngqo kwibhodi enamazinki. Oku kuhlala kubandakanya umbala omnye ukuya kwemithathu. Esi sitayile silungele uhlahlo-lwabiwo mali kubandakanya ukuprinta ilogo yakho okanye ubugcisa ngqo kwibhodi enamazinki. Oku kuhlala kubandakanya umbala omnye ukuya kwemithathu.
3) Idijithali: Ngexesha lale nkqubo, sisebenzisa umbala opheleleyo oshicilelweyo ngqo kwibhodi enamazinki isisombululo esineendleko. Oku kulungele iisampulu zonyaka okanye zexesha elifutshane. Ukuba ufuna uncedo lokuthatha isigqibo sokuba yeyiphi imiboniso yekhadibhodi eprintiweyo eya kusebenza kakuhle kwiprojekthi yakho, nceda usinike umnxeba. Siya konwaba xa sixoxa ngezinto onokukhetha kuzo kwaye sinike iingcebiso ngeengcali.
I-4) Umboniso weRaymin uqhuba konke ukuyila kunye nokuprinta ngaphakathi endlwini. Sinegunya elipheleleyo lokulawula umgangatho kunye nesantya seprojekthi nganye ukuze uhlale usazi ngokuthe ngqo ukuba uza kuyifumana nini iodolo yakho. Nge-setter-setter yethu esizeni, sinika ubungqina bemibala ngaphakathi kweeyure ezingama-36. Sinepesenti engaphezulu kwama-99% exesha lexesha ngenxa yokusebenza kwethu ngaphakathi endlwini. Umboniso weRaymin ubonelela ngezibonelelo ezininzi ezizahlula kukhuphiswano.
Njengenkampani eqinisekisiweyo ye-ISO 9001 / FSC / BSCI, iimveliso zethu zibanjelwe kwimigangatho ephezulu yeshishini. Lonke inyathelo loyilo lwethu, ukuvelisa kunye nenkqubo yoshicilelo luphantsi kolawulo lomgangatho olungqongqo ukuqinisekisa ukuba iziphumo ziya kudlula kulindelo lwakho. Ukongeza, siyazingca ngendlela yethu eluhlaza, sisebenzisa izinto ezakhiwe nge-100% yezinto ezinokuphinda zisebenze. Ukuboniswa kwekhadibhodi eshicilelweyo ngokwesiko kubonelela ngokungenamda ukukhulisa ukubandakanyeka kwabathengi. Ngemibala eqaqambileyo, esemgangathweni, ukubonisa kwakho kunokukhuthaza ishishini lakho kunye nokwandisa ulwazi ngebrand. Banikezela ngomboniso wokutsala ngamehlo kunye nokunxibelelana ukonyusa ukuzibandakanya Ivenkile. Oda ukuBoniswa kweKhadibhodi yakho yesiNtu namhlanje. Intengiso yeemveliso zakho ngesitokhwe esivelisiweyo somboniso oBoniswa ngokuBonisa ngoku. Ngeendlela ezahlukeneyo kunye nokhetho lokushicilela, sinelungelo elifanelekileyo lalo naliphi na ishishini. Qalisa ngokucela uqikelelo namhlanje! Ngaba unemibuzo embalwa malunga neemveliso zethu? Zive ukhululekile ukunxibelelana nathi.
Egqithileyo Iziko lokusongela iZiko lokulahla imigqomo yokuboniswa kwemveliso yeqela
Okulandelayo: I-Smart 3 tier PDQ ibhokisi yokupakisha yeetyathanga eziphambili, ukubonisa ikhawuntara kwintengiso eshushu
Iflethi ipakishe i-Costco epheleleyo yePallet Display yeFrui ...